Kushandisa Network Programmability paCisco Devices | ITS Training
CISCO: Sezvo nguva ye data sedhina uye data inotarisa kukura, ndizvo zvinorevawo kuyerwa kwevanjiniya vanoda kuisa shanduko. Masangano akawanda ane mazana uye kunyange nhamba yakawanda yezvigadzirwa zvemagetsi. Kutarisana nemumwe nomumwe, imwe panguva, hakusi kwakakwana uye kunotora zvinorambidzwa zvinopesana nezvinogona kuitwa nekombiyuta.
Kune avo vakatora pfuti pane chero Cisco networking gadget munguva yapfuura kwenguva refu, chinhu chinonzwisisika kubvunza ndechekuti, "Ndiyo summon line interface (CLI), inotarisira imwe gadget chero ipi zvayo, nzira yakanakisisa inofungidzirwa kutarisana nemhando ipi neipi inokura inowanikwa?"
Zvakaoma kuti injini imwe neimwe ipe "hongu" yakasimba kumubvunzo uyu.
Imwe nzira yakanakisisa yekugadzirisa nayo mashomanana ekugadzirisa zvigadziro inofanira kuva nekwanisi yekuita robotize network network design. Cisco iri kugadzira uye inotora bhizimisi rinotungamirira pa Network Networkmability yekombiyuta.
Straightforward Network Management Protocol (SNMP) rave richishandiswa zvakanyanya nokuda kwekugadzirisa mitambo kwenguva yakareba. Yakanga ichinyatsofungidzirwa munguva yekupedzisira ye1980s uye SNMP haina kumbobvira iine ruzivo rwekakwana network programmability.
Google, semuenzaniso, ataura kuti ichapararira neSNMP yekutarisana kwezvinhu zvekugadzira mitambo gore rino.
Network Programmability muCisco inogona kushandiswa nemitemo yebazi uye magungano ehurukuro:
Interface RESTful: Nenzira yakananga, Representational State Transfer (REST) ​​ndiyo inowanikwa yehutachiona hwepurogiramu dzekutsinhanisa nesaiti. Cisco yakazarura RESTful interfaces pamitambo yakawanda uye kushanduka, uyezve zvakare muCentry Centric Infrastructure (ACI) ye Network Networkmability.
Python: Iyi purogiramu yekusununguka mutauro yakagadzirwa zvakanyanya mukupararira muboka revanhu ve Linux kwenguva yakareba. Cisco ikozvino yakabatanidza shanduro scripting dialect ye python muNX-OS sangano rekushanda, ACI nedzimwe zvikamu zveCisco.
Data Models: Imwe nzira yekutsvaga nzira ndeye nzira yakatarwa yekujekesa kuti deta inoratidze sei nedzimwe nhepfenyuro uye kuti sei data yose inoshandiswa uye inodzingwa. Chimwe chikamu chikuru chegadziriro yemagetsi akawanda ekugadzira zvigadzirwa zvinogona kutaurirwa kune imwe huru data show. Nhamba dzeDhina dzinogona kuenzaniswa ne Network Networkmability. Cisco yakagadzirisa Management Information Tree (MIT) sezvo data inoratidza mukati me ACI. Chimwe chikwata chekusimudza chinoratidza kuti chinogona kushamwaridzana neCisco switches uye switches ndiyo YANG kuratidzwa. YANG inoratidzira data kubva pamashoko okuti "Asi Rimwe Chizvarwa Chinozoitika," iyo inowanikwa yakajeka inoda kukunda kukanganisa kweSNMP.
Nguva dzekugadzirisa kumashandisirwo emagetsi ega ega ega ari kusvika pakuguma. Ikozvino pane zvishoma zvinyorwa zvinyorwa zvinoshandiswa kune zvakawanda zveCisco gadgets zvinowanikwa kune mechanize. Nepo inoda kuti pasi pekutsvaga kwekutsvaga kuve purogiramu chero ruzivo rwekugadzirisa rubotization, mushure mokunge rwazara, nguva inoshamisa uye kushanda mari inogona kuponeswa.
CCNP Certification Nzira - The Complete Guide